नुहाउने क्रममा खोलाले बगाउँदा एकै घरका ५ जना बेपत्ता : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश प्रदेश ७ नुहाउने क्रममा खोलाले बगाउँदा एकै घरका ५ जना बेपत्ता
बाजुरा । हिमाली गाउँपालिका वडा न ५ मा रहेको कवाडी खोलामा बगेर एकै परिवारका ५ जना बेपत्ता भएका छन । बेपत्ता हुनेमा हिमाली गाउँपालिका वडा न ५ कवाडीका धर्म नेपालीकी श्रीमती सत्ता नेपाली, उनकै ३ छोरी र १ छोरा रहेका छन ।
शुक्रबार दिउँसो छोराछोरी समेत लिएर खोलामा नुहाउन गएका बेला छोराछोरी सहित आमा समेत बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिहं ठगुन्नाले बताएका छन् ।
बेपत्ता हुनेमा ३० बर्षीया सत्ता नेपाली उनकी ५ वर्षीया छोरी आरती नेपाली, ४ वर्षीया छोरी सन्तोसी नेपाली २ वर्षीया छोरा सम्मान नेपाली र १ बर्षिया छोरी किस्मती नेपाली रहेको प्रहरी निरीक्षक ठगुन्नाले जानकारी दिएका छन् ।
उनीहरु के कति कारणले बेपत्ता भएका हुन् भन्ने बिषयमा बिस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । घटनाका बारेमा थप बुझ्नको लागि प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिहं ठगुन्नाको नेतृत्वमा प्रहरी टोली सदरमुकाम मार्तडीबाट घटना स्थलतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको छ ।
सोही खोलामा करिव २ महिना अगाडी पनि १ बालिका बगेर बेपत्ता भएकी थिइन् । सो खोलामा हरेक बर्ष ५/६ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको स्थानीयले बताएका छन । बेपत्ता भएका हरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अहिलेसम्म कोही पनि नभेट्टीएको पीलुचौर प्रहरी चौकीले बताएको छ ।
स्वरोजगार बन्दै कोभिड प्रभावित तथा विपन्न परिवार
रौतहट । कोरोनाको महामारीले बन्द हुन लागेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ८ संन्तपुरकी मन्जु देवीको तरकारी पसलमा अहिले फेरि चहल पहल उत्तिकै बढेको छ...
इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने मेची राजमार्ग पहिरोको कारण अवरुद्ध बनेको छ । गएराति परेको अविरल वर्षाको कारण राजमार्ग अन्र्तगत किटेनीदेखि झापा...
कला Kumar Raut - December 23, 2020 0
Editor-Picks Kumar Raut - April 17, 2020 0
काठमाडौं । मानव भीड हुने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रका वन्यजन्तुले लकडाउनपछि स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुुल गर्न पाउनुका साथै रमाउन पाएका छन् । ११ चैतबाट...
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - February 8, 2021 0
काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दिनेश भट्टलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले पत्रकार...
Breaking News Kumar Raut - January 10, 2021 0